Nyi Thu Ya Junior Member
11-01-2016, 01:40 PM ကျွန်တော် နှင့် ခဏတာ ကြုံတွေ့မှုများ အပိုင်း (၂) Nyi Thu Ya
သူကသာပြီးသွားတယ် ကျုပ်ကတမ်းလန်း ဆက်ဆောင့်ရအောင်လဲသူကကြိုက်မှန်းမသိ မကြိုက်မှန်းမသိ မထူးပါဘူးဆိုပြီး ဆက်ဆောင့်လိုက်တယ် ဘာပြောမလဲလို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ နဒီ ကမျက်လုံးလေးမှတ်ပြီးအသက်ပြင်းပြင်းရှုနေတာဗျ မိန်းမဆိုဘယ်နှစ်ကြောင်းဆွဲဆွဲ ခံနိူင်တယ်ဆိုတာအဟုတ်ဗျို့ ကျုပ်ကလည်း ခဏနားပြီးတော့ သူ့နို့လေးကိုစို့ပေးလိုက်တယ် ကောင်မလေး ပြန်စချင်လာပြီထင်တယ် နို့လေးကိုကော့ကော့ပေးနေတာ ဗျာ သူ့ကြည့်ရင်းနဲ့ပြီးချင်သလိုသလိုတောင်ဖြစ်သွားတယ် ဒါပေမဲ့အာရုံအမြန်လွှဲရတာပဲ တော်သေးတယ်မထွက်သွားလို့ " နဒီ ဆက်ဆောင့်ရမလားဟင် "
" ကို ဆောင့်ချင်ဆောင့်လေ "
တော်တော်အခြေအနေကောင်းနေပီ အာဟ စားရကံကြုံတော့မှုတ်ဆိတ်ပျားဆွဲတာပဲ ကျုပ်လဲ သူထပ်စိတ်ပါအောင် သူ့လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့သုံးချက်လောက် နေရာရွေ့စုပ်လိုက် နို့လေးစို့လိုက်လုပ်ပေးတော့ နဒီ ပြန်စိတ်ပါလာတာဗျ ဒီတစ်ခါကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျို့ ကျုပ်တောင်လန့်သွားတယ် ကျုပ်ကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး သူ့အဖုတ်ထဲက ကျုပ်လီး ကိုတောင်မလှုပ်ပဲ ထားထားတာ သူကအောက်ကနေပြန်ပြန်ပင့်ပြီးတော့ အဖုတ်လေးနဲ့ဆောင့်ပေးတာဗျာ ကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်း ရင်ထဲမှာ ရထားဆယ်စင်းလောက်အပြိုင်ခုတ်မောင်းနေသလားမှတ်ရတယ် ကျုပ်ကလည်းဘယ်ရမလဲ ဆောင့်တာပေါ့ " အာ့ အာ့ "
" ကို ဆောင့်မယ်နော် "
" အင်း အာ့ အား အားးစ် "
" ကောင်းလား " " အင်း အား အား အား အားးစ် "
ကျုပ် လီးက သူ့အဖုတ်ကနေထွက်တဲ့အရည်တွေနဲ့ ချောချောပြီးဝင်ဝင်သွားတာအဆုံးထိပဲဗျို့ ကျုပ်လည်း အားမရတော့တာနဲ့ " နဒီ လေးဘက်ထောက်လိုက်ပါလား "
" ဟင် အင်းအင်း "
နာရီငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ နှစ်နာရီခွဲ ဟ တော်တော် ကြာနေပီဟ " နဒီ ဖင်လေးကိုကော့ထား "
" ကို လိုးပေးတာကြိုက်လား "
" ဟာ ဘာတွေမေးနေတာလဲ မမေးနဲ့ "
" ကို လိုးတော့မယ်နော် "
ကျုပ်ကနောက်ကနေဝင်ပီးတော့ သူ့ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး ဆောင့်သွင်းလိုက်တာ ချော်ထွက်သွားတယ်ဗျို့ နဒီ့ အဖုတ်ရဲ့အစေ့လေးကိုသွားထိ တော့ ဟိုကပိုပြီး ဖီလ်းတတ်နေပြီပေါ့ " နဒီ ကို့လီးကိုကိုင်ပြီးတော့ နဒီ့ အဖုတ်ထဲကိုထည့်ပေးလေနော် "
" အင်းအင်း "
သူ့လက်ဖဝါးနုနုလေးနဲ့ ကျုပ်လီးကိုကိုင်ပြီးတော့ သူ့အဖုတ်လေးနဲ့တေ့ပေးတာဗျာ ဒီကကောင်ကဆောင့်ပီလေ မဝင်ဘူး ကိုယ့်လူရေ ဒီတစ်ခါ အပေါ်ကိုထောင်တတ်သွားတာ ယောင်ယောင်လေးခွက်နေတဲ့ သူ့စအိုဝလေးကိုသွားထောက်တာဗျ ကျုပ်လေဘယ်ထဲဝင်ဝင်ဆိုပြီးဖြဲထည့်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမနည်းထိန်းရတယ် ပထမတစ်ခါဆိုတော့ ထင်တိုင်းကြဲလို့ကမရသေးဘူးလေ သူ့လက်လေးနဲ့ကိုင်ပီးတော့နောက်တစ်ခါထည့်ပေးတယ် အဲ့အခါမှဝင်သွားတာဗျ ချော်တယ်ဆိုတာကလည်းအရည်တွေကအတော်များနေပီလေ ကျုပ်လည်းသူ့ကိုဂရုစိုက်မနေတော့ဘူး အပီးကိုလိုးဆောင့်တာ " အာ့ အာ့ အာ့ အားးစ် အားးး "
" အား ကို့ အား အား အားးစ် "
တော်တော်ဆောင့်လိုက်တာဗျ တချက်တချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ကော့ကော့ တတ်သွားပြီး လှုပ်နေတဲ့ဖင်လေးတွေကို ကြည့်နေရတာကိုက အရသာတစ်မျိုးထူးတယ်ဗျ " အား ကို့ အာ့ အာ့ အားးစ် အား"
သူအော် လိုက်တိုင်းခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးစောင့်ပေလိုက်တဲ့အခါ နဒီ့ ရဲ့အဖုတ်လေးထဲကနေ ကျုပ်လီးကိုဆွဲဆွဲပြီးညစ်လာသလို ခံစားရတာနဲ့ သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ သုံးချက်လောက်ဆက်တိုက်ကော့တတ်လာပြီး " အာ့ အားစ် အားးစ် အားးးးးး ကို့ အားးစ် "
သူပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကိုယ်ပါမထိန်းနိုင် တော့ပဲ ကျုပ်လရည်တွေကသူ့အဖုတ် ထဲက သားအိမ်ခေါင်းဝကို အားပြင်းပြင်းနဲ့သွားပန်း
လိုက်ပြီး ကျုပ်ပါပြီးသွားတယ်ဗျ လူကိုတစ်ကိုယ်လုံးမလှုပ်ချင်တော့အောင်ကို မောသွားတာ ချွေတွေလဲပြန်နေပြီ သူ့ကိုယ်လေးပေါ်ကိုထပ်ရက်လေးမှာက်ပီးတော့ သွင်းထားတဲ့ လီးကိုပြန်မထုတ်သေးပဲ ခပ်ဆက်ဆက်လေးတချက်ချက်ဆောင့်ရင်း စည်းစိမ်ယူနေတဲ့ကျုပ်ကို ခင်ဗျားတို့မနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ် " ကို့ လေးလာပြီ ဖယ်တော့လေ "
" သြော် အင်းအင်း "
ကောင်မလေးတော်တော်ဟိုက်သွားတယ်နဲ့တူတယ် အသက်ရှုသံလေးကိုအတိုင်းသားကြားနေရတာ မောရင်လည်းမောလောက်စရာ နှစ်ကြောင်းဆွဲထားတာကိုး " ကို့ အတွင်းခံပြန်ဝတ်ပေးအုံးလေ "
" အင်း ဟိုဖက်လှည့် "
" ဟာ ရှေ့ကတွယ်ရတာကိုရဲ့ "
အခုမှသေချာကြည့်မိတယ်ဟုတ်သားဟ ရှေ့ကချိတ်တွေပါနေတာ ကျုပ် ပိန်းပုံဗျာ သြော် ဒါနဲ့များသွသူဝတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး စိတ်ထဲမှာဘုတေလိုက်တယ် နောက်မှ စဉ်းစားကြည့်တော့သြော် မိန်းခလေးဆိုတာ ဂရုစိုက်တာလေးကိုခံချင်လို့နဲ့တူပါတယ်လေ " ဟင် ၃ နာရီထိုးပီ ကို ကျူရှင်ရှိတယ်မို့လား "
" အင်း ၃ခွဲမှပါ "
" ကို နော် ကိုတို့ကျူရှင်က ဆောင်း ဆိုတဲ့ကောင်မလေး က ကို့ကိုကြိတ်ကြွေနေတာဆို "
" ဟင် ဟုတ်လား သူနဲ့သိပ်စကားမပြောဖြစ်ပါဘူး"
" ကို နဒီ့ ကိုတကယ်ယူရတော့မှာနော် ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ်မလုပ်နဲ့ နဒီ့ ကိုထားခဲ့လို့ကတော့ သက်ပစ်မှာ "
အဲ့တုန်းက မိုးကုတ်သူ ဇာတ်လမ်းတောင်မပေါ်သေးဘူး ကံကောင်းတာကျုပ် နာမည်ကြီးတော့မို့ ??
ဒီလိုနဲ့ကျုပ်လည်းသူ့ပို့ပြီးအိမ်အမြန်ပြန် ရေချိုးရတော့တာပေါ့ဗျာ နဒီ ပြောလိုက်မှ သေချာကြည့်မိတယ် ဆောင်း ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက တစ်ခါ တစ်ခါ ကျုပ် ကိုခိုးခိုးကြည့်နေတာဗျို့ စိတ်ထဲကတော့ အိမ်း စားရကံကြုံအုံးမှာပါလေဆိုပြီး တေးထားလိုက်တယ် ခင်ဗျားတို့မသိသေးတာက နဒီ့အိမ်ကဆေးဆိုင်ဖွင့်ထားတာဗျား ည viber နဲ့ နဒီ ကိုဆေးသောက်ဖို့မှာရတော့တာပေါ့ ဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်လဲ " စိတ်ချပါ ကို ကလည်း နဒီ ညနေထဲကသောက်ထားတယ် " တဲ့ တောက်စ် တော်လိုက်တဲ့ကျုပ်ချစ်သူ တနင်္လာ နေ့ ကျုပ်ကျောင်းကိုအစောရောက်နေတယ် လာပြန်ပီလားဒီအသင်းလို့မပြောနက် တနင်္လာနေ့ ကကျုပ်အသင်းမဟုတ်ဘူး စောနေရတဲ့အကြောင်းက နဒီ့ ကိုတွေ့ချင်နေပီလေ ကျောင်းခန်းထဲလူတော်တော်များများရောက်လာတဲ့အထိ နဒီရောက်မလာသေးဘူး စိတ်ပူပြီလေ သို့လော သို့လော နဲ့ အခန်းအပြင်ထွက်ပြီးထိုင်နေကြတမာပင် အောက်ကခုံတန်းလေးကနေ ကျောင်းပေါက်ဝကိုမျှော်နေတာပေါ့ဗျာ ဟော လာပါပီ မရွှေချော အခုမှအလုံးကြီးကိုကျသွားတယ် ရင်ထဲပူနေရတာကိုပြောတာ တစ်မျိုးမတွေးနဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီပါတယ် ချစ်သူလေးကိုဂရုတစိုက်ထွက်ကြိုနေတော့ လှပတဲ့အပြုံးတပွင့်နဲ့ ကြိုရကြိုးနပ်အောင် ပြုံးပြနေတဲ့ နဒီလေ ဒီနေ့မှ ပိုလှနေသလိုပဲ " နဒီ ကို့ကိုချစ်လား "
" ပြောစရာလိုသေးလို့လား "
ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်စောင်းလေးနဲ့အတူ " ကို နဒီ့ကိုချစ်သေးရဲ့လား "
" ချစ်တာပေါ့များကြီးချစ်တယ် အရမ်းချစ်တယ် "
သူနဲ့အတူ စာသင်ခန်းထဲကို ဘေးကကပ်လိုက်သွားရင်း ကျုပ်တို့ရဲ့ပန်းရောင်နေ့ရက်များဆီသို့။ ကဲ စာဖက်သူ ဘယ့်နှယ်လဲ အရေးအသားက စာလုံးပေါင်းကတော့ တစ်လုံးမှားရင်နှလုံးသားနဲ့ဖက်ပေ့ါဗျာ ??
Nyi Thu Ya အပိုင်း (၃) ဆက်ရန် ........
Thanks given by: Maug Gyi , ဆြာသြ , မောင်နေနိုင်သူ , Zyar6969 , largyi , evercopy , pp1 , daywalker1979 , Kyaw gyi 29